Hemoptysis ချောင်းဆိုး သွေးပါ - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
Hemoptysis ချောင်းဆိုး သွေးပါ
ချောင်းဆိုးတဲ့အခါ သွေးပါတာ အဆုပ် ဒါမှမဟုတ် လေပြွန်ကြီးတွေကနေလာတယ်။ အဲတာကိုသာ ချောင်းဆိုးသွေးပါလို့ သတ်မှတ်တယ်။ ချောင်းဆိုးရာကနေ အစက်ရှူလမ်းအပေါ်ပိုင်းက သွေးကြောလေးတွေပေါက်ရာက ပါတဲ့သွေးကို မခေါ်ပါ။ ကလေးတွေမှာ ပြင်ပပစ္စည်းတခုခုဝင်တာနဲ့ တခြားအသက်ရှူလမ်းပိုးဝင်လို့လည်း သွေးပါတတ်တယ်။ အစာလမ်းကလာတာနဲ့ ခွဲခြားရမယ်။
ပိုးဝင်ရာကဖြစ်တာက အများဆုံး။ ၆ဝ-၇ဝ% ရှိတယ်။ အဆုပ်မှာစဖြစ်တဲ့ကင်ဆာ ၂၃% ရှိတယ်။ ကလေးတွေမှာ ပိုးဝင်ရာကသာဖြစ်တာများတယ်။
1. Acute and chronic bronchitis ရက်တိုနဲ့ တာရှည် လေပြွန်ရောင်ခြင်း၊
2. Pneumonia နူမိုးနီးယား၊
3. Tuberculosis တီဘီနဲ့
4. Lung cancer အဆုပ်ကင်ဆာတွေကနေဖြစ်စေတယ်။
5. Bronchiectasis အဆုပ်ရောဂါတမျိုး၊
6. Lung abscess အဆုပ်ပြည်တည်ခြင်း၊
7. Pulmonary embolism အဆုပ်သွေးကြောပိတ်ခြင်း၊
ရင်ပတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ရမယ်။ ကရိယာထည့်စစ်တာ လိုတာရှိတတ်တယ်။ ၃၄% မှာ ဘာကြောင့် သွေးပါသလဲ ရှာမရပါ။ အကြောင်းရင်းကို ကုသရမယ်။